Yintoni ifuthe lokuThengisa ngezeNtlalo? | Martech Zone
NgoLwesine, Julayi 1, 2021 NgoLwesine, Julayi 1, 2021 Douglas Karr
Yintoni intengiso yemidiya yoluntu? Ndiyazi ukuba oko kuvakala ngathi ngumbuzo wokuqala, kodwa kufanelekile ukuba kuxoxwe. Kukho imilinganiselo emininzi kwisicwangciso esiliqili sentengiso yemidiya yoluntu kunye nobudlelwane bayo obunxibeleleneyo nezinye iindlela zesitayile ezinje ngomxholo, ukukhangela, i-imeyile kunye neselfowuni.
Masibuyele kwinkcazo yentengiso. Ukuthengisa sisenzo okanye ishishini lokuphanda, ukucwangcisa, ukwenza, ukukhuthaza kunye nokuthengisa iimveliso okanye iinkonzo. Imidiya yokuncokola sisixhobo sonxibelelwano esenza ukuba abasebenzisi benze umxholo, babelane ngomxholo okanye bathathe inxaxheba kunxibelelwano lwasentlalweni. Imidiya yokuncokola njengonxibelelwano yahluke kakhulu kwimithombo yeendaba zemveli ngenxa yezizathu ezibini. Okokuqala, umsebenzi ubonwa luluntu ngokubanzi kwaye uyafikeleleka kubathengisi bophando. Okwesibini, oluphakathi luvumela unxibelelwano oluza kwicala-zombini-ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo.
Kukho i-3.78 yezigidigidi zabasebenzisi beendaba zosasazo kwihlabathi liphela kwaye eli nani liza kuqhubeka nokukhula kule minyaka imbalwa izayo. Njengoko ime, ilingana neepesenti ezingama-48 ze- abemi behlabathi ngoku.
Yintoni ukuThengisa ngezeNtlalo?
Isicwangciso esiliqili sentengiso yemithombo yeendaba kwezentlalo kufuneka sidibanise zombini izinto ezibonakalayo kwimidiya yoluntu kunye nokunyusa iindlela ezinokuthi zibekwe iliso kwaye zonyuswe uphawu. Oko kuthetha ukuba ukuba nesicwangciso sokutyhala ii-tweets ezi-2 ngosuku ayisosicwangciso esiliqili sokudibana kwezentlalo. Isicwangciso esigqibeleleyo sidibanisa izixhobo neendlela zokwenza oku:
Uphando lwemakethi -Ukuqokelela ulwazi ukuze wenze uphando olungcono kwaye uqonde kwaye unxibelelane nabaphulaphuli bakho.
Ukumamela ngokwaseburhulumenteni -Ukubeka iliso kunye nokuphendula kwizicelo ezithe ngqo ezivela kubaphulaphuli bakho, kubandakanya inkonzo yabathengi okanye izicelo zokuthengisa.
Ulawulo lweSifa -Ukugcina kunye nokuphucula igama lakho lobuqu okanye uphawu, kubandakanya nokujonga kwakhona, ukuqokelela kunye nokupapasha.
Ukupapashwa kwezentlalo Ukucwangciswa, ukucwangciswa, kunye nokupapashwa komxholo obonelela ngokwazisa kunye nexabiso kubathengi abanokubakho, kubandakanya indlela yokwenza izinto, ubungqina, ubunkokeli bokucinga, uphononongo lweemveliso, iindaba, kunye nokuzonwabisa.
Inethiwekhi yokuncokola -Ukuzibandakanya ngenkuthalo kwizicwangciso ezikhulisa ukufikelela kwakho kubashukumisi, amathemba, abathengi kunye nabasebenzi.
Ukunyuswa kweNtlalo Izicwangciso zokwazisa eziqhuba iziphumo zeshishini, kubandakanya intengiso, izibonelelo kunye nenkxaso. Oku kunokwandisa ekufumaneni nasekuqesheni abachaphazeli ukuba bandise ukunyusa kwakho kuthungelwano lwabo.
Iziphumo zeshishini akusoloko kufuneka ukuba zezona zithengiweyo, kodwa zinokwakha ulwazi, ukuthembana kunye negunya. Ngapha koko, amajelo asekuhlaleni ngamanye amaxesha ayisiyonto iphakathi yokuqhuba ukuthenga ngokuthe ngqo.
I-73% yabathengisi bakholelwa ukuba iinzame zabo ngentengiso yemithombo yeendaba zentlalo ziye zasebenza okanye zasebenza kakhulu kwishishini labo.
Imithombo yeendaba zentlalo ihlala isetyenziselwa ukufumanisa ngomlomo, umthombo wengxoxo kuphando, kunye nomthombo wokudibanisa - ngabantu - kwinkampani. Ngenxa yokuba i-bi-directional, ihluke kakhulu kwezinye iindlela zokuthengisa.
I-71% yabathengi abanamava amahle ngophawu kwimidiya yoluntu kunokwenzeka ukuba bacebise uphawu kwizihlobo zabo nakwiintsapho.
View Martech Zone's' Imidiya yeendaba zeNtlalontle
Imithombo yeendaba yezeNtlalontle kunye neMizekelo yokuSebenzisa
I-54% yabasebenzisi beendaba zosasazo basebenzisa imidiya yoluntu kuphando ngeemveliso.
Uphando lwemakethi -Ndisebenza nomvelisi welokhwe okwangoku ophehlelela uphawu lwabo ngqo kubathengi kwi-intanethi. Sisebenzisa ukumamela kwezentlalo ukuchonga amagama aphambili abajolise kuwo abasebenzisi xa bethetha ngabakhuphiswano abaphambili ukuze sikwazi ukufaka isigama kwimizamo yethu yokubeka uphawu.
Ukumamela ngokwaseburhulumenteni -Ndinezilumkiso ezibekelwe uphawu lwam kunye nale ndawo ukuze ndibone ukukhankanywa kwam kwi-Intanethi kwaye ndinokuphendula ngqo kubo. Ayinguye wonke umntu omaka uphawu kwiposti, ke ukumamela kubalulekile.
Ulawulo lweSifa -Ndineempawu ezimbini zalapha ekhaya endisebenza nazo apho simisele izicelo zokuphononongwa ngokuzenzekelayo kubaxhasi babo. Lonke uphononongo luyaqokelelwa kwaye luphendulwe, kwaye abathengi abonwabileyo bayatyhalwa ukuze babelane ngovavanyo lwabo kwi-Intanethi. Oku kukhokelele ekwandeni kokubonakala kwiziphumo zokukhangela zasekhaya.
Ukupapashwa kwezentlalo -Ndisebenza neenkampani ezininzi ezilawula iikhalenda zomxholo kwaye zibeke ngaphakathi iinzame zazo zokucwangciswa I-Agorapulse (Ndingunozakuzaku). Oku kubasindisa ngetoni yexesha kuba akukho mfuneko yokuba baphume baye kulawula yonke into ngokuthe ngqo. Sidibanisa Umkhankaso wokumakisha i-UTM Ukuze sikwazi ukubona indlela imidiya yoluntu eqhuba ngayo ukugcwala kunye nokuguqulwa kubuyela kwindawo yabo.
Inethiwekhi yokuncokola -Ndisebenzisa iqonga elindincedayo ukuba ndichonge kwaye ndinxibelelane nabaphembeleli kunye nemibutho enokundiqesha kwi-LinkedIn. Inefuthe elibonakalayo kumathuba am okuthetha kwaye incede inkampani yam ukuba ikhulise ukuthengisa kwayo.
Ukunyuswa kweNtlalo -Abathengi bam abaninzi babandakanya intengiso yemidiya yoluntu xa bekhuthaza imicimbi, ii-webinars, okanye ukuthengisa. Ukujolisa okungathethekiyo kwezi ziqonga zentengiso kubonelela kuluncedo olukhulu.
Ndiyaqonda ukuba ungakha imikhankaso yemidiya yoluntu ebandakanya ukusetyenziswa kunye nabalamli ngeendlela ezingahambelani nokukhetha kwam ngasentla. Ndiphosa nje ukusetyenziswa gwenxa kweedemon nganye ukubonelela ngengqondo yokuba zinokusetyenziswa ngokwahlukileyo.
Abathengisi abaninzi bathambekele ekujongeni kwindawo ebanda kakhulu okanye eyona baziva bekhululekile kuyo. Le yingozi elinde ukuba yenzeke ngenxa yokuba bengasebenzisi okanye badibanise abalamli kubo bonke amandla abo.
Njani amashishini asebenzisa iMedia Media
Veza uphawu lwakho -Ilizwi lomlomo lisebenza ngokukuko kuba kufanelekile. Abantu abakwishishini elithile, umzekelo, bahlala behlangana kumajelo eendaba ezentlalo kunye namaqela. Ukuba umntu omnye wabelana ngophawu lwakho, imveliso okanye inkonzo, inokubonwa kwaye yabelwe ngabaphulaphuli ababandakanyeke kakhulu.
Phuhlisa indawo ethembekileyo -Ukuba unesicwangciso esisebenzayo sokubonelela ngexabiso kubaphulaphuli bakho-nokuba kungoncedo oluthe ngqo, umxholo okhethiweyo, okanye ezinye iindaba, iingcebiso kunye namaqhinga, uluntu lwakho luya kukhula lukuxabise kwaye lukuthembe. Ithemba kunye negunya zizinto ezibalulekileyo kuso nasiphi na isigqibo sokuthenga.
Ukuphucula inkonzo yabathengi -Xa umthengi wakho ekubizela uncedo, yincoko ye-1: 1. Kodwa xa umthengi efikelela kumajelo eendaba ezentlalo, abaphulaphuli bakho baya kubona ukuba usabela njani kwaye uphendule iimfuno zabo. Inkonzo enkulu yabathengi inokuphindaphindwa kwikona nganye yeglobhu… kwaye nenkonzo yabathengi inentlekele.
Yandisa ukubonakaliswa kwedijithali -Kutheni umxholo wemveliso ngaphandle kwesicwangciso sokwabelana nokukhuthaza? Ukuphuhlisa umxholo akuthethi ukuba uyayakha, iza kuza. Abayi kuyenza. Ke ukwakha uthungelwano olukhulu lwasentlalweni apho abahlali baba ngabathetheli boluphawu banamandla amakhulu.
Ukunyusa ukugcwala kunye ne-SEO Ngelixa iinjini zokukhangela ziqhubeka ukungabandakanyi amakhonkco, abalandeli kunye nabalandeli njengeyona nto iphambili kuluhlu lweinjini yokukhangela, akukho mathandabuzo ukuba yomelele Icebo losasazo lweendaba zentlalo liza kuqhuba iziphumo ze-injini yokukhangela.
Yandisa ukuthengisa kwaye ufikelele kubaphulaphuli abatsha - kuqinisekisiwe ukuba Abantu abathengisayo ababandakanya isicwangciso-qhinga kwimidiya yoluntu abo bangenayo. Kananjalo, abantu bakho abathengisayo bayayiqonda indlela yokujongana nengxelo engeyiyo kwinkqubo yokuthengisa kuba bayathetha nabantu yonke imihla. Isebe lakho lokuthengisa kaninzi alenzi njalo. Ukubeka abameli bakho bokuthengisa ngaphandle kwezentlalo ukwakha ubukho yindlela eyoyikekayo yokwandisa ukufikelela kwakho.
Sika iindleko zokuthengisa Ngelixa ifuna umfutho, ukukhula okuhamba phambili kwimidiya yoluntu ngokulandelayo, izabelo, kunye nokucofa ekugqibeleni kuya kuqhuba iindleko ngelixa lisonyusa ibango. Kukho amabali amangalisayo eenkampani ezivela ekuqhekekeni ukuya ekwandiseni emva kokwakha ubukho beendaba zosasazo ezizodwa. Oko kufuna isicwangciso esinokuthi sichasane neenkcubeko ezininzi. Zininzi iinkampani ezoyikisayo kwimidiya yoluntu kwaye zichitha nje ixesha labo.
I-49% yabathengi ibango lokuba baxhomekeke kwizindululo ezinefuthe kwimidiya yoluntu ukwazisa ngesigqibo sabo sokuthenga.
Ngaphakathi kwezi ndlela kukho iindlela zokonyusa ukufunyanwa kunye nokugcinwa kwabathengi bakho kunye nokubathengisela kuhambo lwabo lwabathengi.
Impembelelo yeendaba zosasazo
Ngelixa ndingasoloko ndityhala abathengi bam ukuba batyale imali ngokupheleleyo kuyo yonke imithombo yeendaba zentlalo, ndibona ukubuya okuqhubekayo kutyalo-mali xa abathengi bam belawula igama labo kwaye besakha ixabiso nabalandeli babo kwi-Intanethi. Ngayiphi na imeko, ukungahoyi amandla eendaba zosasazo kunokuba semngciphekweni wophawu ukuba abawuphathi ngendlela umba wenkonzo yabathengi. Abathengi bakho balindele ukuba ubekhona kwaye uphendule ngexesha elifanelekileyo kumaqonga aphambili eendaba ezentlalo… kubandakanya izixhobo kunye nezicwangciso zokwenza oku kubalulekile.
tags: FacebookIntengiso ye-Facebookukuthengisa okuhlanganisiweyouphando lwemakethiudumo onlineTwilleyidumelaulawulo lwegamaReviewsUkumamela ngokwasentlalweniyentengiso yeendabainjongo yemidiya yoluntuSocial Media Marketingukwazisa ngemidiya yoluntuimithombo yeendaba zentlaloinethiwekhi yokuncokolaukunyuswa kwentlaloukupapashwa kwezentlaloTikTokUkuthengisa kwi-youtube
Jan 6, 2009 kwi-7: 38 AM
Andinakuvuma ngakumbi, bendihlala ndiye epatini ndizama ukwenza ividiyo yam isebenze kwiimvumi! Kwaye nokuba banomdla, bebengekho kwisimo sengqondo esifanelekileyo, hayi njengaxa bakwi-intanethi kwaye bafumana indawo yam kwaye bachitha ixesha bejonga umsebenzi wam, ngoku abathengi banxibelelana nam.
Ngokubhekisele ekusebenziseni ividiyo ukuzenzela ngokwakho, kungcono ukuba unamathele ekubhaleni izithuba zamagama achazayo okanye ucinga ukuba ukuvota kukwalombono olungileyo?
Jan 6, 2009 kwi-8: 09 AM
Enkosi! Izibonelelo zokubloga nevidiyo ukubonelela ngamagama anokukhangelwa zisaphumelela kwincwadi yam. Inani elincinci labantu lisebenzisa ukukhangela ividiyo-kwaye ngaphakathi kwabo, uninzi aluthathi xesha ukuyichaza ngokufanelekileyo ividiyo.
Ukudibanisa ezi zinto zombini kunamandla kodwa kuthatha ixesha elide, nangona kunjalo. Ukukwazi ukupapasha iBhlog yeVidiyo (enokuPodcastable), KANYE nebhlog yakho malunga nevidiyo nganye ngokuqinisekileyo iya kuphucula amathuba akho okufunyanwa!
Jan 7, 2009 kwi-12: 29 AM
Iposi enkulu uDoug. Ndibonile uninzi lwabanini bamashishini babucala basebenzisa gwenxa iinethiwekhi zentlalo. Ayibonakali nje njengogaxekile, kodwa iyanuka nge-spam eshibhile. Indlela engcono kukuthatha ixesha lokwakha umxholo okwi-intanethi (ibhlog lukhetho olukhulu), wenze ubungcali, ubonise ukugqwesa kubugcisa bakho, kwaye uphumelele iziphumo zokukhangela.
Jan 7, 2009 kwi-7: 42 AM
UDoug sisithuba esihle. Njengenkampani yewebhu eyahlukileyo, sizama rhoqo ukufumana iindlela ezintsha zokusebenzisa imithombo yeendaba ukukhulisa ngokufanelekileyo ukuthengisa kunye nokuthengisa. Ndicinga ukuba ubethe amanqaku aphambili kakhulu malunga nokusetyenziswa gwenxa kweendaba zosasazo, izinto endicinga ukuba neengcali kufuneka zizigcine engqondweni.